> यी हुन् सबैभन्दा लामो यौनाङ्ग भएको दाबी गर्ने ३ पुरुषहरु
२८ बैशाख २०७७, आईतवार १६:४८
के साइजले फरक पार्छ ? हो, कम्तिमा यी पुरुषहरुका लागिचाहिँ उनीहरुको यौनाङ्गको आकारले अवस्य पनि फरक पारिरहेको छ ।
आफ्नो यौनाङ्ग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लिङ्ग भएको दाबी उनीहरु गर्दछन् । त्यसरी दाबी गर्नेमध्ये एकजना पुरुषको यौनाङ्गको लम्बाई त १८ इन्च रहेको छ ।
निकै नै ठूलो यौनाङ्ग हुनु उनीहरुको सौभाग्य हो भन्ने ठान्छन् धेरै जना । तर उनीहरुको गुनासोचाहिँ बेग्लै छ।
उनीहरुमध्येका एकजना पुरुष आफ्नो अति नै लामो यौनाङ्गकै कारण हलिउडमा प्रवेश गर्ने सपना तुहिएको बताउँछन् । हलिउड फिल्म निर्देशकले लामो यौनाङ्ग असोभनीय हुने र त्यसले दर्शकलाई विकर्षण पैदा गर्न सक्ने भन्दै उनलाई फिल्ममा अभिनय गर्नबाट रोके ।
लामो लिंग हुने अर्का व्यक्तिचाहिँ यौनाङ्गकै कारण आफू राम्रोसँग हिँडडुल गर्न नपाउने हुँदा आफ्नो नाम अपाङ्गको सूचीमा दर्ता गराउने सोचिरहेका छन् ।
अर्का एकजनालाई त ठूलो यौनाङ्गकै कारण एकपटक कुनै पसलमा सामान चोरी गरेको आरोपसमेत लाग्यो । असामान्य तरिकाले बाहिर देखिएको सुरुवालको भागमा उनले पसलको सामान चोरी गरेर हालेका होलान् भन्ने पसल धनीले सोचे । तर वास्तवमा त्यो चोरीकेा सामान नभई उनको आफ्नै गोप्य अङ्ग थियो ।
आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो यौनाङ्ग भएको दाबी गर्ने केही व्यक्तिहरुको विवरण यस्तो छः
जोहान फाल्कोन : उनी अमेरिकाको न्युयोर्कका बासिन्दा हुन् । कलाकार समेत रहेका फाल्कोनको यौनांगको लम्बाई साढे १३ इन्च छ । लामो यौनांगकै कारण आफ्नो हलिउड यात्रामा धक्का लागेको उनी बताउँछन् ।
रोबेर्टो इस्क्विभेल क्याबरेरा : मेक्सिकोको साल्टिलोमा बस्ने क्याबरेराको यौनाङ्गको लम्बाई १८.९ इन्च रहेको छ । भिमकाय यौनाङ्गका कारण उनले जीविकोपार्जनका लागि गर्नुपर्ने कामहरु समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । साथै यौनाङ्गकै कारण सरीरको तल्लो भागमा कपडा लगाउनसमेत गाह्रो हुने भएकाले हिँडडुल गर्नसमेत उनलाई अप्ठेरो छ । त्यसैले आफ्नो नाम अपाङ्गको सूचीमा दर्ता गर्नका लागि उनले निवेदन दिए । सुरुमा त सरकारी निकायले उनलाई अपांगको सूचीमा दर्ता गर्न मानेन । तर अन्ततः उनले अपाङ्गको सूचीमा दर्ता हुन सफल भएका छन् । आफ्नो भिमकाय यौनाङ्गका कारण जो कोही महिला आफूसँग यौनकार्य गर्न डराउने गरेको उनी बताउँछन् ।
स्टिभह्वाइटहर्स्ट : बेलायतको स्ट्रोक अन ट्रेण्ट नामक सहरका बासिन्दा स्टिभ पनि विश्वका सबैभन्दा ठूलो यौनांग भएका व्यक्तिमध्ये एक हुन् । ठूलो यौनांगकै कारण लगाएको सुरुआत उक्सिँदा उनलाई एकपटक सुपर मार्केटमा सुरुवालभित्र सामान लुकाएको आरोपसमेत लाग्यो । आफूले सुरुवालभित्र सामान नलुकाएको प्रमाण दिनका लागि उनले आफ्नो सुरुवाल नै खोल्नुपरेको थियो । सुरुवालभित्रबाट असामान्य रुपमा उक्सिएको चिज चोरीको सामान नभई उनको आफ्नै यौनाङ्ग भएको थाहा पाएपछि सुपरमार्केटका कर्मचारीको सातो गएको थियो । मिरर डट को डट युकेबाट
स्कूले बच्चाले होमवर्क नगरेकोले लाइन काटिदिन आग्रह गर्दै विद्युत् कार्यालयमा फोन गरेः अडियो सहित
प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च फर्किए..
3 thoughts on “यी हुन् सबैभन्दा लामो यौनाङ्ग भएको दाबी गर्ने ३ पुरुषहरु”
Thursday, May 19, 2022 at 2:58 pm
Friday, May 20, 2022 at 4:31 am
I’m amazed, I must say. Rarely do I encounterablog that’s both equally educative and amusing, and withoutadoubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this in my search for something regarding this.